Dagaallo Dad badan ay ku dhinteen Oo ka dhacay Wadanka Itoobiya.
Saturday May 04, 2019 - 11:43:58 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa ku sheegaya in dagaallo xooggan ay ka dhacayaan qeybo kamid ah gobollada ay degaan Amxaarada, kuwaas oo u dhexeeya qowmiyado dega wadankaas.
Dagaallo dhacay maalintii shalay oo Jimco ahayd ayaa dhaliyay dhimashada tobanaan ruux oo kamid ah dhinacda qowmiyadaha ku dagaallamaya Itoobiya , dagalkaas oo xoogiisa ka socda deegaannada ay degaan Amxaarada.
Masuul katirsan maamulka gobolka Binishanquul ee wadanka Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday iney socdaan baaritaanno lagu raadinayo meydadka iyo dhaawacda dad lagu xasuuqey deegaanno hoosyimaada magaalada madaxda gobolka.
Isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters ayuu shaaca ka qaaday masuulakn in waxyeellada dhimashada iyo dhaawaca ay gaareyso ugu yaraan 80 ruux, ayna jiraan dad farakutiris ah oo badbaaday kadib markii ay isku soo xireen iskuul maxalli ah.
Kooxaha weerarka soo qaaday oo katirsan qowmiyadda Amxaarada ayaa sidoo kale dab ku daaray guryo ay degnaayeen dad shacab ah, taas oo aan la ogeyn kahsaaraha ka dhashey.
Dalka Itoobiya ayaa waxaa kusii xoogeysanaya weerarada iyo dagaallada u dhexeeya qowmiyadaha Amxaarada iyo Tigreega ah, kuwaas oo uu dagaalkkooda sii kordhay wixii ka dambeeyay markii uu talada dalkaas la wareegay Abiy Axmed.
Dhinaca kale ciidamada Xabashida Itoobiya ayaa ku dhowaad 12 qof oo shacab Soomaaliyeed ah ku dilay deegaan katirsan gobolka Shiniile ee dhulka Soomaaligalbeed, wararka ka imaanaya Shiniile ayaa sheegaya in Itoobiyaanu ay rasaas ku fureen dad isugusoo baxay degmada Afdem ee gobolka Shiniile.
Dagaallo udhaxeeya Al Shabaab iyo Ciidamada Dowlada oo ka dhacay degmada Qoryooleey iyo Warar kale.
Dhageyso: Tartan Aqooneed Xiisa badan oo loo qabtay Odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed
Taliban oo dhaleecaysay Weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay Magaalada Kaabuul.
Doorashooyin iskasoo hor jeeda oo ka dhacay magaalada Kismaayo.
in kabadan 50 Askari oo ku dhintay Weeraradii ka dhacay degmada Awdheegle.